Iikhosi zeAulaGEO -Geofumadas
I-AulaGEO sisiphakamiso esakhelwe kule minyaka idlulileyo, sinika uluhlu olubanzi lweekhosi zoqeqesho ezinxulumene nezihloko ezinje nge: IJografi, iGeomatics, Ubunjineli, uKwakha, uLwakhiwo kunye nezinye ezijolise kummandla wobugcisa bedijithali. Kulo nyaka, kuvulwa ikhosi yesiseko yeJograji apho ...
I-Autodesk Inventor Nastran yinkqubo enamandla kunye neyomeleleyo yokulinganisa amanani kwiingxaki zobunjineli. I-Nastran yinjineli yesisombululo sendlela ephelileyo, eqatshelwa ngoomatshini bezakhiwo. Kwaye akukho sidingo sokukhankanya amandla amakhulu asizisela i-Inventor kuyilo loomatshini. Ngexesha lale khosi uya kufunda ukuhamba ...
Iikhosi-3D Modeling Iikhosi-BIM MEP Iikhosi-Imveliso yobomi beMveliso Iikhosi zokungenisa
Into nganye entsha yayinabalandeli bayo abathi, xa besetyenziswa, batshintsha amashishini ahlukeneyo. I-PC itshintshe indlela esiwaphatha ngayo amaxwebhu aphathekayo, i-CAD ithumele iitafile zokuzoba kwiindawo zokugcina iimpahla; imeyile yaba yindlela emiselweyo yonxibelelwano olusesikweni. Bonke baphela belandela imigangatho eyamkelweyo kwilizwe liphela, ubuncinci ukusukela ...
Iikhosi-Ukusebenza kweBIM Izifundo zeKhosi
Ikhosi ye-Excel-amaqhinga aphambili nge-CAD-GIS kunye neMacros
I-AulaGEO izisa le khosi intsha apho uya kufunda ukufumana okungaphezulu kwi-Excel, esetyenziselwa ubuqhetseba nge-AutoCAD, Google Earth kunye neMicrostation. Ibandakanya: Ukuguqulwa kokunxibelelanisa ukusuka kubume bendawo ukuya kwiprojekti kwi-UTM, Ukuguqulwa kokudityaniswa kwedesimali ukuya kwiidigri, imizuzu kunye nemizuzwana, Ukuguqulwa konxibelelaniso olucwangcisiweyo ukuya kwiibheringi kunye nokuhamba, Thumela ukusuka kwi-Excel ukuya kuGoogle Earth, ...
Izifundo ze-AulaGEO, Ezahlukeneyo
I-AulaGEO iveza ezi seti zezifundo ze-4 zibizwa ngokuba yi "Autocad Civil3D yoPhononongo kunye neMisebenzi yoLuntu" eya kukuvumela ukuba ufunde indlela yokuphatha le software intle ye-Autodesk kwaye uyisebenzise kwiiprojekthi ezahlukeneyo nakwiindawo zokwakha. Yiba yingcali kwisoftware kwaye uya kuba nakho ukuvelisa imisebenzi yomhlaba, ukubala izinto kunye namaxabiso okwakha kunye ...
Ngaba uyafuna ukufunda ukusebenzisa izixhobo ezibonelelwe yiArcGIS Pro, ukuqala ekuqaleni? Le khosi ibandakanya iziseko zeArcGIS Pro; ukuhlela idatha, iindlela zokukhetha ezisekwe kuphawu, ukudala imimandla enomdla. Emva koko kubandakanya ukufakwa ekhompyutheni, ukongeza iileya, iitafile zokuhlela kunye neekholamu kwiimpawu. Uya kufunda ukwenza iisimboli ...
Le yikhosi yokwazisa kwizixhobo zeSolidWorks kunye nobuchule bokumodareyitha. Iya kukunika ukuqonda okuqinileyo kweSolidWorks kwaye iya kugubungela ukudala imizobo ye-2D kunye neemodeli ze-3D. Emva kwexesha, uya kufunda indlela yokuthumela ngaphandle kwifomathi yoshicilelo lwe-3D. Uya kufunda: Cura3D modelling yoshicilelo lwe-3d, ufakelo ...
Iikhosi-Imveliso yobomi beMveliso Iikhosi zoYilo zoMatshini
I-AulaGEO iveza le khosi ijolise kuphuhliso kunye nokunxibelelana kwedatha yendawo yokuphunyezwa kwe-Intanethi. Kule nto, izixhobo zekhowudi zasimahla ezintathu ziya kusetyenziswa: I-PostgreSQL, kulawulo lwedatha. Ukukhuphela, ukufakela, ukumiselwa kwecandelo lomhlaba (PostGIS) kunye nokufakwa kwedatha yendawo. GeoServer, ukwenza isitayile idatha. Khuphela, ukufakela, ukudala ...
I-CREO sisisombululo se-3D CAD esikunceda ukukhawulezisa ukuveliswa kwemveliso ukuze ukwazi ukwenza iimveliso ezingcono ngokukhawuleza. Kulula ukufunda, uCreo uyakuthatha ngaphandle komthungo ukusuka kwinqanaba lokuqala loyilo lwemveliso ngokuvelisa nangaphaya. Ungadibanisa ukusebenza okunamandla nokungqiniweyo kunye nentsha ...
Inkqubo yoLwakhiwo lweMasonics nge-ETABS-Imodyuli 7
Kule khosi ye-AulaGEO, ibonisa indlela yokulungiselela iprojekthi yendlu yokwenyani eneendonga zokwakha, usebenzisa esona sixhobo sinamandla sokubala kwintengiso. Isoftware ye-ETABS 17.0.1. Yonke into enxulumene nemimiselo icacisiwe ngokweenkcukacha: iMigaqo yoYilo kunye noKwakhiwa kweZakhiwo zoKwakha iMasonry R-027. kwaye oku…
Ikhosi ye-CSI ETABS-Uyilo loLwakhiwo-Ikhosi yeNgcali
Le yikhosi equka inkqubela phambili yethiyori kunye nokusebenza kweZakhiwo zeDonga loKwakha. Yonke into enxulumene nemimiselo iya kucaciswa ngokweenkcukacha: Imigaqo yoYilo kunye noKwakhiwa kweZakhiwo zoKwakha iMasonry R-027. Oku kuyakuchaza izinto ezinje ngefuthe elifutshane lekholamu, elisetyenziselwa iiNdonga zoMatshini kunye ...
Ngale khosi uya kuba nakho ukuphuhlisa iprojekhthi yendlu yokwakha ngeeNdonga zoLwakhiwo lweSakhiwo, usebenzisa esona sixhobo sinamandla kwimarike yesoftware yokubala yolwakhiwo ETABS 17.0.1 Yonke into enxulumene nemigaqo icacisiwe ngokweenkcukacha: Imigaqo yoYilo kunye noKwakha Izakhiwo zamatye R-027. kwaye eyokugqibela ...
Ngale khosi uya kuba nakho ukulungiselela iprojekthi yokwenyani yendlu eneendonga zokwakha, usebenzisa esona sixhobo sinamandla sokubala kwintengiso. ETABS 17.0.1 Isoftware Yonke into enxulumene nemimiselo icacisiwe ngokweenkcukacha: Imigaqo yoYilo kunye noKwakhiwa kweZakhiwo zoKwakha iMasonry R-027. kwaye eyokugqibela iya kuthelekiswa ne ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 kwiphepha elilandelayo